१ करोड पारिश्रमिक लिने साउथका सुपरस्टार कमेडियन ब्रह्मानन्दमको यस्तो छ जीवनी – Medianp
मङ्गलबार, ०४, मङि्सर, २०७५
१ करोड पारिश्रमिक लिने साउथका सुपरस्टार कमेडियन ब्रह्मानन्दमको यस्तो छ जीवनी
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: शनिबार, पुष २९, २०७४१४:३०
एजेन्सी, अमिताभ बच्चन अभिनित सूर्यवंशम रिलिज भएको १८ वर्ष पुरा भएको छ । यो फिल्म जति अमिताभको लागि महत्वपूर्ण थियो । त्यो भन्दा बढि दक्षिण भारतीय कमेडियन ब्रह्मानन्दमको लागि महत्वपूर्ण भयो । किनकी उनलाई यो फिल्मबाटै दर्शकको साथ मिलेको थियो ।
यो फिल्ममा ब्रह्मानन्दमको रोल छोटो थियो । तर त्यही छोटो रोलले आज उनलाई कमेडियन स्टार बनाइदिएको छ । एउटा छोटो भूमिकामा देखा परेका ब्रह्मानन्दमले आज आएर एउटा फिल्ममा अभिनय गरेको एक करोड पारिश्रमिक लिने गरेका छन् । हालसम्म उनले हजार भन्दा बढि फिल्ममा अभिनय गरिसकेका छन् । ६१ वर्षका ब्रह्मानन्दम मात्र यस्तो व्यक्ति हुन जसले दक्षिण भारतमा बन्ने हरेक दुई फिल्म मध्ये एकमा अभिनय गरेकै हुन्छन् ।
उनको जन्म १ फेब्रुअरी १९५६मा आन्ध्रप्रदेशको साटेनापल्ली जिल्लाको मुपल्ला गाउँमा भएको थियो । उनको परिवार निकै गरीब थियो । तर पनि उनले एमए सम्मको अध्ययन गरे । त्यसपछि उनले एक तेलुगु प्राध्यापक भएर अत्तिल्ली कलेजमा काम गर्न थाले । उनी मातापिताको आठौँ मध्ये सातौँ सन्तान हुन् । उनको नाम गिनिज बुकमा पनि दर्ता भएको छ । उनले २००७ मा एकै भाषामा ७ सय वटा फिल्ममा अभिनय गरेको रेकर्ड गिनिज बुकमा लेखाएका छन् ।
थारु समुदायमा माघी पर्वको चहलपहल शुरु
चोरलाई सडकमै लडाएर युवतीले यस्तो सजाय दिइन् ! भिडियोमा हेर्नुहोस् २२ वर्षीय युवतीको बहादुरी !
पल्सर बाईकलाई टक्कर दिन अब आयो नेपाली बजारमा, सुजुकीको जीक्सर बाइक (फोटोसहित)
आफ्नै बिहेमा यसरी नाचे रणवीर-दीपिका (भिडियो सहित)
विश्वकै सुन्दर युवती सामाजिक सञ्जालमा भाइरल
करिनासँग विवाह गरेकै दिन सैफले पहिलो श्रीमतीलाई लेखेका थिए यस्तो पत्र
अभिनयबाट सन्यास लिँदै आमिर खान, अन्तिम फिल्म बन्ने छ ‘महाभारत’
सैफ र करिनाको छोरा तैमुरको तस्वीरको यति महँगो मूल्य ! जुन थाहा पाउनुभयो भने पनुृहुनेछ दंग
स्टेज चढ्न नपाउँदै अप्ठ्यारोमा परिन् करिश्मा फोटोफिचर
एलोपेथिक औषधीको सेवन गर्दा देखापर्ने समस्या (भिडियो सहित )
सन्दीप लामिछानेको अर्को फड्को, ५७ लाख पारिश्रमिक पाउने गरी पाकिस्तान सुपर लिग खेल्ने
रियल मड्रिड म्यानचेस्टर युनाइटेडका रासफोर्ड र टोटनह्यामका एरिक्सनका लागि ९० मिलियन खर्चन तयार
बाहिरियो दिपिका र रणवीरको विवाहका रोमान्टिक दृश्य, हेर्नुहोस् १२ सुन्दर तस्विरमा!
बहादुर कुकुरको अगाडी दुई सिंहको लागेन केही ! घाइते भए पनि एक्लै भिड्यो (भिडियो सहित)
एक महिलाले गराइन् आफ्नो डिभोर्सको उपलक्ष्यमा भव्य पार्टी र अन्त्यमा विहेको कपडा पनि बमले उडाइन्
वि एम डब्लु ले ल्यायो दुर्घटना नै नहुने मोटरसाईकल ! यस्ता छन् यसका रोचक विशेषता
मान्छेको शोख पनी अनेकन यस्तो काम गरेर युटुब बाट पैसा कमाउन्छिन यी युवतीले – हेर्नुस भिडियो